Mitambo yakanakisa paApp Store, wakambovaedza vese here? | IPhone nhau
Paul Aparicio | | IPhone mitambo
Ndeapi mitambo yakanakisa paApp Store? MuApp Store mune mitambo yakawanda yakanaka, pane chero munhu akazvipokana nazvo. Dambudziko (rakakomborerwa) rekuve nesarudzo dzakawanda kudaro kuziva kuti ndedzipi zvacho zviri kunyatsoita kuti tiwane nguva yakanaka pasina matambudziko akakura. Mazhinji emazita akanaka ane masimba akaomarara, asi kune mamwe akawanda ayo, pasina kurasikirwa nehunhu, ane masimba akareruka anotibvumidza kunakidzwa nemutambo kubva paminiti 1.
Mune ino runyorwa, iyo kunyangwe ichiverengerwa, isina kuiswa muhurongwa hwehunhu kana kukosha, isu tinokuratidza zvatinofunga kuti ndizvo iyo 25 yakanakisa mitambo paApp Store sezvo yakaonekwa muna2008. Kune mitambo yemarudzi ese anogona, saka zvirokwazvo pane zvinopfuura zvinokufadza.
Iyo mitambo makumi maviri neshanu yakanakisa paApp Store
Infinity blade 2: Iyo Infinity Blade saga ndeimwe yeakakurumbira mumitambo ye, ini ndingati, kurwa. Kubva mutambo wepakutanga, uyo wakasvika mu2010, vashandisi vazhinji vakadzora mitambo yayo mitatu. Infinity Blade 3 yakatomboonekwa pane yakakosha Apple paive nesimbi. Pakati pevatatu, isu tinofunga yakanakisa ndeye 2.
Grand Theft Auto 3: zvishoma zvinogona kutaurwa nezve iyo GTA saga yausingazive. Iyi nhevedzano yemitambo yakashandiswa mumitambo, memes uye ese marudzi emajee, ayo anoratidza mukurumbira uye kukosha. GTA 3 ndiyo yakanakisa yesaga.
Nyika Inopera Newe: Solo Remix: Pasi pezita iri isu tine RPG iyo yakatanga kuburitswa yeNintendo DS. Kune avo vedu vakambotamba michina yekare yeascade, Nyika Inopera Newe inotiyeuchidza nezveavo mitambo yekurwa yatinotungamira pakati pevavengi vakawanda, nguva imwe neimwe yakasimba uye yakawanda. Pamusoro peizvo zvataurwa pamusoro apa, iri zita rinosanganisirwa nehunhu hweiyo chero RPG. Chaizvo chinokurudzirwa.
TheWorld EndswithYou: SoloRemix17,99 €
Kufamba Vakafa: Mutambo: Kana ndiri kutaura nezve budiriro yeiyo Kufamba Vakafa akateedzana, ini handisi kutsvaga chero chitsva. Iwo akateedzana, akavakirwa pamumhanzi wezita rimwe chete, anotiratidza zviitiko zveboka revanhu vanoedza kugara mumashure meapocalyptic zombie nyika. Mumutambo watichatamba saLee Everett, tsotsi rakatongwa rinofanira kurarama pakati pevanhu vazhinji vasina kufa muzvikamu zvitanhatu zvakasiyana. Uri kuzoipotsa here?
Kufamba Vakafa: Mutambovakasununguka
nhare: Kana iwe uchida RPGs, haugone kurega kutamba Bastion. Kwete pasina, yakasarudzwa seimwe yeakanakisa maapplication muApp Store muna2012. Ini ndingati zvakangoita seRPG yekubata skrini. Zvishoma zvandinogona kutaura.
wakatsamwa bhidhiri: Hapana chero munhu anoziva akatsamwa neshiri? Wanga uri kupi? Yakagadzirwa muna 2009 naRovio, iri boka reshiri rinorwisa nguruve dzakasvibira dzakaba mazai avo dzakabudirira zvekuti vakasiya zviyero zve iPhone yedu, iPod nePadad kuti vagadzire yavo yemusika musika. Kunyangwe asiri iye akanakisa mumifananidzo, yekutanga Angry Shiri ndiyo yakatanga zvese uye ndosaka achikodzera kuve pane urwu runyorwa.
Limbo: Kwandiri? Chii chinoitika? Pasi peichi chinzvimbo chakazvimiririra isu tinodzora mwana munyika ine rima pasina kurira. Tichafanirwa kumutora kuburikidza nenjodzi dzinoshamisa dzatinogona kufungidzira, kunge dandemutande hombe rinotidzingirira kusvikira tapedza naro. Asi tiri kuenda kupi? Isu tinofanirwa kunge tiri muLimbo uye isu tinofanirwa kutsvaga shamwari / hanzvadzi kana chero musikana iyeye… kutanga patsva… Hatisi kushamisika kuti inoonekwa seimwe yemitambo yakanakisa paApp Store.
Rayman Jungle Run: urwu runyorwa harugone kupotsa chero endles inomhanya. MuRayman Jungle Run isu tichafanirwa kumhanya (kurudyi) semumwe mutambo chero werudzi urwu, asi munyika yaRayman, izvo zvinoita kuti chive chinhu chakakosha.
Zvidiki mapapiro: kune akawanda akafanana mitambo muApp Store, asi Tiny Wings ndiyo yekutanga yavo uye iyo inokodzera kuve mune runyorwa rwemitambo yakanakisa muApp Store. Mumutambo uyu tichafanirwa kudzora kubhururuka uye kudonha kweshiri kuitira kuti tifambe nekukurumidza uye tisvike kure sezvinobvira. Kwakafanana nekumhanya kusingaperi, asi kwerumwe rudzi.
Zvidiki mapapiro1,99 €
Fruit Ninja: mumwe wemitambo iyo isingade sumo. Mutambo watinozofanira kutsvedza minwe yedu kucheka michero mumakomboni akakura zvikuru. Kune akawanda mavhidhiyo paYouTube apo katsi dzinotamba Fruit Ninja, mavhidhiyo anonakidza semutambo pachawo.
Zvibereko Ninja Classic1,99 €
Jetpack Joyride: zita remukurumbira mukuru mariri isu tichafanirwa kusvika kure sezvinobvira nekumhanyira kurudyi. Jetpack Joyride inomhanya isingagumi matinozodzora hunhu hunomhanya nepfekitori yakashongedzwa nemhando yepfuti inoita kuti abhururuke. Kune matani eanokosha mafambiro, saka kunakidzwa kunovimbiswa.
Scribblenauts Remix: pasi pechinyorwa ichi tine chiito-adventure mutambo wepikicha uyo wakatanga kugadzirirwa Nintendo 3DS. Tichafanirwa kudzora Maxwell munzira yake kunotora maStarites.
Max Payne Mobile- Iyo nharembozha yaMax Payne ndeye yakakodzera vhezheni inoita kuti ive pane ino runyorwa rwemitambo yakanakisa paStore App. Ndiwo mutambo wekupfura, asi kwete mumunhu wekutanga, une yakanaka backstory.
Plants vs. ZombiesKunyangwe chikamu chechipiri chatove chiripo, mutambo wekutanga hausi usina hunhu. Uye zvakare, hazvisanganise zvinoshungurudza mukutenga-mu-app, zvinoreva kuti tinogona kunakidzwa nemusoro mukuru tisina kumira kana kubhadhara. Iyo haina yekuwedzera kwechikamu chechipiri, asi haichidi icho kana.
Nyonganiso Rings II: Kana iwe waifarira iyo yekutanga Yekupedzisira Yekufungidzira uye urikutsvaga chimwe chinhu chakafanana nemanhasi magirafu muchanza cheruoko rwako, pamwe yakanyanya kunaka sarudzo ndeye Chaos Rings II. Hausi mutambo wakachipa, asi chokwadi unokodzera yuro yega yega.
GTA: Chinatown Hondo- Uyu ndiwo musoro wechipiri weiyo GTA nhepfenyuro pane urwu runyorwa uye imhaka yekuti yakakosha. Zvishoma zvinogona kutaurwa nezvake kunze kweku "tamba ugozozviona."
GTA: Chinatown Hondo4,99 €
Nova 3: pasi pezita rekuti Near Orbyt Vanguard Alliance 3 isu tine mumwe weakanakisa wekutanga-munhu mitambo paApp Store, asi nemamwe masimba akakosha anoita kuti mutambo uyu usangova werudzi rwayo. Ndakave nayo kubva payakabuda uye yakakosha.
tiny Tower: Yakatangwa mu2011, muTiny Shongwe isu tichafanirwa kuvaka chivakwa chedu mukufananidza kwebhizinesi rekuvaka. Zvinotonyanya kunakidza kupfuura zvazvinonzwika. Chinhu chakanakisa ndechekuti iwe uzviedze, sezvo panguva yekunyora uku, zviri zvemahara (zvingave zvisina kujairika, asi zvinogona kuchinja).
Diki Shongwe: 8 Bit Retro Tycoonvakasununguka
Timberman: Kana isu tisingakwanise kuisa Flappy Bird pane iyi runyorwa nekuti musimudziri wayo akaibvisa kubva kuApp Store, tinoisa Timberman, mutambo unoita kunge bullshit muma lens ayo nemifananidzo, asi izvo zvinogadzira yakawanda yekupindwa muropa uye neyatinogona kupokana nayo shamwari.
Anoshamisa Anoputsa- Kana uchitamba pamascreen ekumusoro, zvakakosha kuti maitirwo ari nyore. Asi kana kuita kwacho kuri nyore, mutambo wacho unenge usina kukosha. MuAmazing Breaker isu tichafanira chete kudonhedza akateedzana emabhomba kuti aparadze mufananidzo pamberi pedu. Ini ndinoifarira zvakanyanya uye ndosaka ndakaiisa pane iyi runyorwa.
Anoshamisa Anoputsa0,49 €
Geometry Hondo 3: kwandiri ndiyo yakanyanya kunaka. Iyo mhando yekusanganiswa pakati peyechitatu munhu shooter mutambo nemutambo wezvikepe, zvese zvine mufananidzo wenyika yedhijitari uye nezwi rinoshamisa. Dai ndaizokurudzira imwe kubva pane iyi runyorwa, ini ndaikurudzira uyu mutambo.
Swordigo: pasi peiyi zita isu tine "yakapusa" chikuva mutambo. Chii chakashata nemhando idzi dzemitambo? Zvakanaka, ndinovada uye vanondiyeuchidza nezvemitambo yevanonyaradza vekare. Swordigo yakandipa yakanaka nguva uye ndeimwe yeayo mashoma ayo ini ndapasa zvachose.
Real Racing 2: iyi runyorwa haigone kupotsa mutambo wemota. RR2 mutambo umo tichafanirwa kumhanya makwikwi akasiyana nemota dzakasiyana uye nekuvandudza nekufamba kwenguva. Kwandiri zviri nani kwazvo kupfuura RR3 yekusave nekutenga kwakabatanidzwa, izvo zvinotibvumidza isu kutamba tisingamire kana kubhadhara kana mutambo uchida. Pamusoro pezvo, ichokwadi, kusiyana nemamwe masaga akadai seAsphalt, ayo kunyangwe chiri chokwadi kuti akanaka kwazvo ... haachisiri echokwadi
Cheka Tambo: Ongororo: Hauna kuziva here bhuru girini rinodya zviwitsi? Zvakanaka unofanira. Chinangwa chedu ndechekupa chipfuwo chedu pipi padanho, icho chatinofanira kucheka tambo panguva chaiyo, pamwe nekumisikidza nzira dzakasiyana kuti tizviite. Ive nekuchenjerera, kana tikasaiwana, chipfuwo chedu chinosuruvara.
Cheka Tambo: Ongororo GOLD0,99 €
PAC-MAN 256: Uye chekupedzisira asi chisiri chidiki, iyo XXI century Pacman. PAC-MUNA 256 ishanduro yemutambo wengano umo isu tichagara tichifanira kuenda kumberi kana, zvikasadaro, iyo isina chinhu ichatikomberedza. Zvakare, isu tine masimba akasiyana ayo anotibvumidza isu kuuraya zvipoko nenzira dzakasiyana. Chinhu chakanaka ndechekuti yakasununguka. Chinhu chakashata ndechekuti isu hatizokwanisa kutamba nemasimba kana tikasamirira / kubhadhara mushure memitambo mitanhatu.
PAC-MUNA 256 - Maze isingagumivakasununguka
Wakafungei nezve mitambo yakanakisa paApp Store? Ndeupi mutambo wako waunofarira paApp Store? Icho chiri pane urwu runyorwa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Mitambo yakanakisa paApp Store
Iyo nhamba 13, giochi, ndeye giochi & rompicapo?
Jesu, ndakaperetera zvisizvo zita renhamba 13. Mutambo uyo unongedzo unoreva ndiHook Champ. Kutenda yambiro. kwaziso!
IGN inobva kuU.S. uye iri muSan Francisco kwete kubva kuUK…. 100% yakakurudzirwa
Pindura kuna beto
Mitambo yakanaka kwazvo, pachangu ndinonyatsoda Asphalt 5
Mubvunzo: Ndeupi mutambo wekubata? (iyo ine mudhudhudhu)
Pindura kuna Alee
Uye iyo Doodle Jump? 🙁
@beto, vhura peji wobva wati UK 😉
Mutambo upi uri mudhudhudhu mumufananidzo? = (= (= (= (= (= (= (= (= (
Joseph !! akadaro
uye imwe TAP TAPI ?? kana kuti sim city ?? 🙁 OSMOS handizive kuti ndeyei .. hehe
Pindura kuna joseph !!
Kwandiri imwe yeaya andisingakwanise kupotsa ndeye Bejeweled 2
Uye neyayo miniti-miniti BLITZ yakanakira uri mumutsetse kana imba yekumirira.
Uye muchero ninja ???????
Chinyorwa chakanaka, makorokoto!
Ini handidi rondedzero iyi zvachose, kune akawanda ari nani uye anonakidza mitambo kupfuura aya. X zvirinani kubva mumaonero angu echokwadi.
Pave nenguva yakareba kubva pandakaona runyorwa rwunosiririsa seizvi ... kana iwe uchitsvaga runyorwa rwekusarudza kuti ndeupi mutambo wekutenga, iyi haisi iyo xD
baba flo akadaro
Mhoro mitambo yakanaka asi kana uchida shiri dzakatsamwa ndinokurudzira marori & dehenya mutambo wechigadziko wakafanana asi nemarori ndinozvida ini ndinovimba unozvifarira
Pindura kuna mai flo
yekutanga yakaipa kwazvo xd ke kubhejera crap
Pindura kuna cristiansalasduran
Ini ndinonyatsoda iyo hiway zombie (RECOMMENDATION)
mumwe wemitambo yakanakisa ndewekuti kupi mvura yangu (iripi mvura yangu, muchiSpanish). Ndinoikurudzira 🙂
Pindura kuna fabii
Jose santana akadaro
Kwandiri mutambo wakanakisa uye wakachipa ndeyekuwanda kwemitezo 3, zvinongodhura masenti makumi masere nemasere uye zviri kuvaraidza zvikuru nemifananidzo isingakundiki uye nekuita !!!
Pindura kuna Jose Santana
Iyi mitambo haina kunaka, kune akawanda, mazhinji ari nani kupfuura ese aya
uye zvakare kupotsa iyo jetpack, michero ninja uye vakafa vakafa
Izvi hazvina kunaka, mutambo wakanakisa muApp iri MINECRAFT. Waizviziva here !!!!!!!
Ha ha uye zvakare boos 2
Zvakare iyo SUBWAY SURFERS
Iwe haugone kupotsa izvo kubva kune supercell (kurwisana kwemhuri, boom beach, hay zuva)
David Cuadrado Fernandez chigadziri chemufananidzo akadaro
Leo mhanza kana nyika yeGoo yezvakanakisa
Pindura David Cuadrado Fernandez
Leo Fortuny kana nyika yeGoo yakakosha
kutadza kunzwisisa akadaro
Iwe wasiya rakakosha saga Iyo Kamuri. Graphical zvinoshamisa. Inokurudzirwa uye yakawanda iyo yese saga
MOTO WEMAHARA NDIWE UNOGONA
Bhora rakasarudzika dambanemazwi
DRK | Random Munhu akadaro
Ivo havana kuisa Mahara Moto uye ine anodarika gumi miriyoni kana nekudaro kurodha pasi. Mitambo yese yakaipa. Vaviri vanondifarira chete: geometry war 10 uye chaiyo racing 3 (ini ndatoitamba hahaha).
Pindura DRK | Random Munhu
Q3 2017 mhedzisiro: Apple inoenderera ichikura uye iyo iPad inoshamisika
TestFlight inowedzera huwandu hwevanoedza beta kune zviuru gumi zvevashandisi